Dagaal faraha looga gubtay oo maanta ka dhacay Buuraha Galgala iyo Ciidamo laga dilay Puntlan, Alshabaab - Wargeyska Faafiye
Dagaal faraha looga gubtay oo maanta ka dhacay Buuraha Galgala iyo Ciidamo laga dilay Puntlan, Alshabaab
Wararka ka imaanaya Gobolka Barri, ayaa sheegaya in halkaasi ay kuwada dagaalameen Ciidamada Maamulka Puntland iyo Kooxda Alshabaab.
Dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa la sheegayaa inuu socday ku dhawaad Saacad iyo bar, iyadoona uu ka dhashay Khasaaro kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada uu dagaalka u dhexeeyay ee Puntland iyo Alshabaab.
Qoraal lagu soo daabacay Warbaahinta Al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalka Galgalla lagu dilay 4 Askari oo ka tirsan Ciidamada Maamulka Puntland, sida laga soo xigtay Warbaahinta ku hadasha Afka alshabaab.
Sidoo kale, dagaalkaasi waxan weli ka hadlin Mas’uuliyiinta Maamulka Puntland, iyadoona dagaalka uu ahaa mid ka dhacay Buuraleyda Galgalla.
Lama sheegin Khasaaraha dagaalkaasi kasoo gaaray Kooxda Alshabaab, balse warar hoose waxa ay tilmaamayaan in dagaalkaasi looga dilay ilaa Shan askari.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsWiil ay dhashay Saado Cali oo dacwad ka gudbiyay Dahabshiil.C/Qeybdiid oo la doortay.UN wary of instability in Somalia.Family of teen found near Franklin Av. bridge rejects suicide speculation.Dowladda KMG oo heshiis caalami ah saxiixday.